Xaaladda Muxamed Cali oo laga dayrinayo! + Sawirro – Gool FM
Xaaladda Muxamed Cali oo laga dayrinayo! + Sawirro
Raage June 3, 2016
(Phoenix) 03 Juunyo 2016 – Halyeeyga feerka miisaanka culus ee Muhammad Ali ayaa haatan xaalad deg deg ah ku jira, isagoo sida la sheegayo aad u liita.
Carruurta feeryahankan oo usoo kala dheereeyay inay fariistaan qarka sariirta uu ku xanuunsan yahay ayaa muujiyey sida ay markan u rajo xun yihiin.
Waxaa horraanba isbitaalka ku sigan 4 ka mid ah 9 carruur ah oo uu dhalay 74-jirkan, kuwaasoo ay ku jiraan gabdhaha Laila, Hana iyo Maryum, oo haatan jooga isbitaal ku yaalla magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, halkaasoo ay howlwadeennada caafimaadku ay la tacaalayaan dhibaato dhinaca neef-mareenka ah oo soo wajahdey Ali.
Carruurta ayaa xalay kasoo kala duulay meelo kala duwan oo ka tirsan dalka Maraykanka kaddib markii ay dhakhaatiirtu sheegeen inaysan hubanayn inuu sii taaq taaqi karo feeryahankii hore, waxaana xitaa la diidey in isbitaal kale loo bedelo kaddib markii ay tillaabadaas mid halis ah u arkeen dhakhaatiirtu.
Muhamed Ali oo asal ahaan lagu magacaabi jirey Cassius Clay ayaa diinta Islaamka ee xaniifka ah qaatay 1975.
Ilaahay ha u fududeeyo ayaan leennahay Gool FM ahaan.
RASMI: Marc Bartra oo ka tegaya Barcelona (Kooxdee ku biirayaa?)
RASMI: Dani Alves oo ku biiraya Juventus